Biafra: Nnamdi Kanu oo ku hadlaya ka dib daadkii fiidiyowga "Moment sariirta", ammaanay xaaskiisa - TELES RELAY
ACCUEIL » kale Biafra: Nnamdi Kanu oo ku hadlaya ka dib daadkii fiidiyowga "Moment sariirta", ammaanay xaaskiisa
oo amiir u ahaa dadka asal ahaan mamnuucay of Biafra (IPOB), Nnamdi Kanu, ayaa ammaanay naagtiisa, Uchechi Okwu-Kanu, wacaya "First Lady of IPOB ah" ee "barwaaqo aad u qurux badan."
Naija News ayaa sheegay in hogaamiyaha IPOB uu qoraalkan ku qoray jimcihii bogga Twitter-ka microbloging.
Kanu ayaa sheegay in dadka badankiisu si fiican u fahmayn markuu ku dhawaaqay raadiyaha dhowr jeer in uu naagtiisa ahayd barwaaqo aad u qurux badan, laakiin in malaayiin qof oo adkaysan kari waayay markhaati isaga u hadda in ay ku hadhay "rabaani ah adorably sida had iyo jeer "xitaa kadib dhalashada.
Madaxa IPOB wuxuu tweeted ku qoray: "Markii aan ku dhawaaqay dhowr jeer at radio in aad qurux badnayd, inta badan ma fahmin.
"Hadda malaayiin ayaa ii markhaati furi kara. Xitaa ka dib dhalashada, weli sidaasi waa rabbaani iyo farxad. Ugu dambeyn, marwalba waan ku guuleysaneynaa. "Biyofra waa weyn" wuxuu tweeted hoggaamiyaha gooni-goosadka.
Markaan marar badan ku dhawaaqay in aad adagtahay quruxda, inta badan ma fahmin. Hadda malaayiin ayaa ii marqaati furi kara. Xitaa ka dib shaqada, sida ugu wanaagsan ee ilaahnimadiisa weligeed ah. Ugu danbeyntii waxaan mar walba ku guuleysaneynaa. #Biafra dhagaxyada!
Dhanka kale, Naija News ayaa sheegay in bayaankii Kanu uu ku soo beegmay ka dib markii fiidiyoow "hurdada" ay la socdeen xaaskiisa oo dib u soo ceshatay internetka.
Qaar waxay sheeganayaan in fiidiyoogu dhowaan yahay, laakiin madaxa hay'adda IPOB Uche Mefor ayaa sheegay in fiidiyowga la horgeeyay midka u dhexeeya 2013 iyo 2014.
"Waxaan ogsoonahay in isticmaalka falalkan dabacsan uu ku egyahay duruufaha keliya ee xakamaynta argagax ee horay u burburay iyo cabsida Aso Rock iyo cabashadooda elektaroonig ah ee isku dayaya inay soo ceshadaan muuqaalkooda. yaraadeeniyo deyr ", sharaxay Mefor. ayaa lagu yiri bayaan ay soo saareen Naija News.
Daawo fiidiyoow dhamaystiran ...